Blackjack Blackjack. Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wax ku saabsan Blackjack 21 (2022)
Ugu Weyn Ee	/ Isbadalka	/ Blackjack Blackjack
Dhamaan waxyaabaha ku saabsan blackjack. Blackjack 21 - Istaraatiijiyad, Xeerar iyo Ciyaar Bilaash ah
BlackJjack ama Blackjack 21 ayaa si fudud u ah nooca ugu aasaasiga ah ee ciyaarta. Ciyaartoydu waxay ku raaxeystaan ​​noocaas maadaama ay u oggolaaneyso qaar ka mid ah xulashooyinka sharadada ugu dabacsan oo guud ahaanba ay u fududaato ciyaartoy kasta oo ah xirfadda xirfadeed si ay ula socdaan ficilka. Waxaan eegaynaa ciyaarta oo dhan, oo waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ogaato waa kan hoose.
Aasaaska caadiga ah ee loo yaqaan 'Blackjack'
Ciyaartan ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu fudud ee lagu ciyaaro oo lagu raaxeysto. Si aad u ciyaarto 21 Blackjack, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad raadiso khamaar lagu kalsoonaan karo. Markaad sameyso, waxaad awoodi doontaa inaad raacdo Gameflow. Halkan waxaa ku yaal jajaban waxa ay asaastu aasaasiga ah ku kariso.
Classic-ka Blackjack waxaa laga soo horjeedaa ganacsadaha
Ciyaarta inta badan waxay leedahay hal deck
Kaararka oo dhan laga bilaabo 2-9 waxay mudan yihiin qiimahooda la soo bandhigay
Kaararka oo dhan 10 ilaa k waa mid ka mid ah toban dhibcood midkiiba
ACES waa mid gaar ah maxaa yeelay waxay mudan karaan hal dhibic ama 11 dhibcood
Ciyaarta ayaa leh dejin aad u fudud oo lagula tacaali doono laba kaar bilowgii. Labada kaar ayaa lagala dhaqmayaa wajiga ka hor imanaya kaararka wajahaya ee iibiyaha iyo boodhka wejiga. Ka dib tan ayaa ka baxsan wadada, Ciyaarta 21 Blackjack Online ayaa laga yaabaa inay bilaabato.
Goobaha ugu wanaagsan ee ugu fiican ee loo yaqaan 'Clasjack'
Sida loo ciyaaro Classic Classic
Nooca caadiga ah ee ciyaarta ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu caansan halkaas. Waa wax fudud oo ku filan in wax la barto, iyo xaqiiqda ah in ganacsaduhu uu isticmaalo oo keliya kaliya 52-kaalaa ah oo ka mid ah 52-kaararka ayaa macnaheedu yahay in ciyaartoydu ay leeyihiin gees aad u wanaagsan oo ay la macaamilaan.
Taasi waa sababta Blackjanck 21 qadka aan ahayn ciyaarta ugu badan ee la heli karo, laakiin shaki la'aan mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee lagu raaxeysto haddii aad ka soo laabaneyso ganacsade khamaar. Waa kuwan qawaaniinta tixgelinta marka la ciyaarayo noocaas:
Haddii aad hesho gacanta 21-qodobka toosan ee bilowgiisu tahay (sida caadiga ah ee soo bandhigaya Ace iyo kaarka toban-qiimeyaal ah), si otomaatig ah ayaad ugu guuleysataa
Haddii aad hesho Blackjack dabiici ah isla waqtiga uu ganacsadu sameeyo, ciyaarta waxaa loo dejin doonaa isku xirnaan, sidoo kale loo yaqaan "Riix" ee 21 Blackjack Online
Laacibka iyo ganacsaduhu waa lumin doonaan haddii gacantooda ay ka sarreyso 21 dhibcood oo wadarta ah. Tan waxaa lagu magacaabaa "dhalo" ereyga been-abuurka ah
Si kastaba ha noqotee, arrimuhu waxay xiiseeyaan haddii labada gacmood ee kuugu horreysa ay wax ka qabateen oo aad haysatid wax ka yar 21 dhibcood. Tani waxay had iyo jeer noqon doontaa kiiska. Marka laga eego markan, waxaad ka soo qaadan kartaa xulashooyin badan:
Hit: Waxaad qaadataa ficilka hit-ka marka aad rabto inaad hagaajiso gacantaada oo aad diyaar u tahay inaad halis geliso kaadh kale.
Istaag: Waad taagan tahay haddii aad aamminsan tahay in gacantaada hadda ay aad uga fiican tahay ganacsadaha uu leeyahay oo uu ku siiyo itimaalka ugu sarreeya ee guusha.
Kala go ' Waxaad kala goysaa gacmahaaga haddii aad ku kalsoon tahay in gacmaha ka dhalatay ay ku siin doonaan fursad wanaagsan oo lagu guuleysto.
Labanlaab: Ciyaartoyda ayaa labanlaabmay markii ay kalsooni ku qabnayaan gacantooda inay guuleysan doonaan, waxayna rabaan inay ka helaan qiimaha ugu badan ee taas oo ay labanlaabto iyada oo labanlaabmaysa lacagta la soo dhaafay.
Is dhiib: Haddii aad rumeysan tahay in gacantaadu aysan fursad u lahayn inay guuleysato, waxaad dooran kartaa inaad dhiibto.
Shuruucda Classic-ka Blackjack
Si la fahmi karo, Ciyaarta 21 Jack Madow ayaa leh qawaaniin kale oo gaar ah oo aad u baahan tahay inaad si dhakhso ah u fiiriso ka hor intaadan gelin. Iyagu waa wax iska fudud in la xusuusto xusuusta, marka waa inaadan ku dhibtooneynin inaad ku soo gasho salka hoose ee 21ka kaadhka.
Inta badan noocyada kala-goysyada Blackjack, ganacsaduhu waa inuu ku dhuftaa 16 jir jilicsan oo istaagay jilicsan 17
Blackjack dabiici ah ayaa bixin doona 3: 2, oo Blackjack dabiici ah ayaa sidoo kale ka xoog badan kaararka kale ee 21-ka-qiimeynta
Blackjack, oo aad u kala qaybin kartaa gacmahaaga mar ka dibna ku dhufan kartaa dhowr jeer gacmo kasta gacanta. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u kala qaybiso lammaane aces, waxaad heli doontaa hal kaar oo ah hal kaar kasta oo aad hayso.
Waad u kala qaybin kartaa labo-labo oo labo ah, in kastoo.
Mararka qaarkood, waad labanlaabmi kartaa ka dib kala-goynta, waxayna kuxirantahay nooca ciyaarta.
Ciyaartoyda looma ogolaan karo inay laban laabto kaararka qaarkood waxaana badanaa loo oggol yahay inay labalaabmaan kaararka illaa 9, 10, ama 11 dhibcood.
Haddii aad doorato inaad labalaabto wager-kaaga kaararka furitaanka, si otomaatig ah ayaa laguula tacaali doonaa kaar saddexaad.
BlackJjack wuxuu kuu oggolaanayaa inaad iibsato sharad caymis, laakiin sharadkan guud ahaan waxaa loo arkaa fikrad xun.
Xeerarkan ee Blackjack-ka caadiga ah waa inay kaa caawiyaan sidii aad ku sii socon lahayd ciyaarta. Ciyaar kasta waxay u egtahay waxyar oo ka duwan, marka waxaa ugufiican in la eego qawaaniinta gaarka ah. Tusaale ahaan, 21 + 3 Blackjack wuxuu soo bandhigi doonaa qaab dhismeedka qaab dhismeedka "khamaarka" oo gaar ah oo soo bandhigaya qawaaniin guud oo ka duwan.
Bixinta Classic ee Blackjack
6: 5 Haddii ganacsaduhu muujinayo ace
3: 2 on blackjack dabiici ah
Istaraatiijiyadda caadiga ah ee Classicjack
Guud ahaan waxaa jira laba dariiqo oo lagu ciyaaro blackjack. Waa inaad ka fiirsataa in ganacsaduhu uu taagan yahay mid jilicsan 17 ama uu ku dhufto jilicsan 17. Labaduba waxaa lagu dabaqi doonaa iyadoo kuxiran qawaaniinta gaarka ah ee ciyaarta. Jaangooyada madow 21 waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo hagaajiso iyadoo kuxiran xaalada.
Istaag 18+ dhibcood ee gacanta adag ee kooxda ku adkeyd ee ka dhanka ah ganacsadaha 2-a (ganacsadaha taagan 17)
Ku garaac 4-7 dhibcood gacanta ciyaaryahanka gacanta ku haya ganacsadaha 2-a (ganacsadaha uu ku dhuftay 3)
Laba dhibcood oo ku saabsan 17 dhibcood gacanta ciyaaryahanka ee ka dhanka ah ganacsadaha 2-6, haddii kale garaac hadii ganacsaduhu muujinayo 7-a (ganacsade uu ku dhufto 3)
Had iyo jeer u kala qaybi gacanta ciyaaryahanka muujinaya 88, 99, AA, markii uu ganacsaduhu ku dhufto jilicsanaanta 17. Waxyaabaha ka reeban ayaa jira. Tusaale ahaan, waxaad ku istaagi doontaa ganacsadaha 7 iyo 10 haddii aad leedahay 99.
Xaalad kasta oo ciyaar ciyaar ah oo loo yaqaan 'Classic Blackjack' waa mid gaar ah. Taasi waa sababta aan ku liis gareynno dhowr koorsooyin suurtagal ah oo ficil ah. Khasab kuguma aha inaad xasuusato riwaayadaha ugu fiican maadaama aad si fudud u eegi karto istiraatiijiyadda tixraacida mid ka mid ah jaantusyada.